Iskindir Naggaa: Qeerroo fiinxaleessi biyyaaf balaadhan jedhe – Kichuu
[ July 26, 2021 ] TDF in Control of Debark Amhara region	Africa
[ July 26, 2021 ] Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Waldiyaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu	Videos
[ July 26, 2021 ] ODUU AMMEE Joollee dirqamaan guruu Oolmaa Oromiyaa fi Ethiopia	Videos
HomeAfaan OromooNewsIskindir Naggaa: Qeerroo fiinxaleessi biyyaaf balaadhan jedhe
Iskindir Naggaa: Qeerroo fiinxaleessi biyyaaf balaadhan jedhe
Waan abbaabbaa Taammirat jedhe dhaggeeffadhaa
Iskindir Naggaa: ”Inji.Taakkalaa Uumaa magaalaa Finfinnee irratti muudamuu hin qaban ture. Fedhii uummata magaalaa Finfinnee eegsisuuf, mirga uummata Finfinneef falmuu hin danda’an yaada jedhun qaba.”
Odeessa kana faana dhahuuf Link [geessituu] kana banaa.
Shoroorkeessummaan himatamee hidhaa yeroo dheeraa booda waggaa darbe kan gadhiifame gaazexeessaa Iskindir Naggaa yaadni waltajjiiwwan garaagaraarratti kaasaa jiru falmisiisaa ta’eera.
(bbcafaanoromoo)—-Ilaalchi inni Qerroof qabu akkasumas Kantibaan magaalaa Finfinnee Inj. Taakalaa Uumaa dantaa jiraataa magaala Finfinnee eegsisuu hin danda’u, filannoodhaan isa adabna jechuun kan dubbate ni eeramu.
Yaadota falmisiisoo ta’an kanaafi dhimmoota biroorrattis BBC waliin haasa’eera deebiin isaa kunooti.
”Mirga uummata Finfinneef falmuu hin danda’an”
Ani Obbo Takkalaa Uumaa akka namaatti nan kabaja. Jijjiirama kana keessatti qooda bahaniifis gatii nan kenna. Garuu Finfinnee bulchuu qabu kan jedhu irratti walii hin galu.
Ilaalcha uummata Finfinnee harka caalu hin qooddatan waan ta’eef, fedhii uummata magaalaa Finfinnee eegsisuuf, mirga uummata Finfinneef falmuu hin danda’an yaada jedhun qaba.
“Qonnaan bulaan waardiyyaa ta’uu hin qabu”
”Abiy Ahimad MM biyyattii guutuu ta’uu qaba”
Jalqabumaa akkamitti Finfinnee akka bulchan muudaman kan jedhu yoo gaafanne ammoo jijjiiramni waliigala jiru akkamiin deemaa akka jiru waan mul’isu qaba, sanaan wal qabata.
Walumaagalatti ilaalcha Obbo Taakkalaan qaban keessaahuu faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu irratti ejjennoon isaan qaban ilaalcha uummata Finfinnee harkaa caalu bakka hin bu’u. Kanaaf Finfinnee irratti muudamuu hin qaban ture.
<strongclass=”story-body__crosshead”>”Qeerroo fiinxaleessi biyyaaf balaadha jedheera”
Kanaan dura yaada Qeerroo irratti kenneefi amma ammoo waa’ee Finfinnee kanan dubbadheen wal qabatee, garaagartee yaadaa qofa osoo hin taanee doorsisni narra gaheera.
Si ajjeesna jedhanii na doorsisanii jiru. Kuni balaaleffatamuu qaba. Anaaf qofa osoo hin taane akkuma biyyaattuu siyaasaafi humna, siyaasaafi doorsisa gargar baasuu qabna. Ani yoon dogoggorellee yaadaan injifatamuun qaba malee doorsisaan ta’uu hin qabu.
Paarlaamaa keessa yeroo jalqabaaf Afaan Oromootiin nama dubbatan
Magaalaa Finfinneefi tarkaanfiiwwan haaromsaa
Ani Qeerroo bakka lamattan qooda. Qeerroo fayyaalessi jira. Qeerroo fiinxaleessi jira. Qeerroo fiinxaleessi biyyaaf balaadha jedheera sana ammas irran deebi’a.
Walumaagalatti Qeerroon biyyaaf balaadha garuu hin jenne. Qeerroo fiinxaleessi biyya keenyaaf balaa kan ta’e ilaalcha isaan qofa miti humnatti fayyadamuu waan barbaaduufi. Kanaaf ammoo warri maqaa Abbaa Torbeen gurmaa’an ragaadha.
Qeerroo isa fiinxaleessa irratti qabsaa’uu qabna. Maaliif, diimokiraasiif gufuudha, tokkummaaf gufuudha.
”Kan caala deemuu dandeenya ture”
Jijjiirama biyyattii keessatti dhuferraa gammachuun qaba. Yeroo dheeraaf waan eegaa turredha.
Haata’u malee ce’uumsi dimookrasii bakka gahuu qaburra gaheeraa? kana gaafa madaallu waggaa darbe tokko keessa hanga eegamu deemara jedhee hin amanu.
Kana caala dabarree deemuun nurra jira jedheen yaada. fakkeenyaaf obbo Getaacheew Asaffaa irratti ajajni hidhaa bahee hanga ammaatti qabamuu dhabuun isaanii qaawwa jiru agarsiisa.
ኢሳትንና የኢሳት ሰበብ በጋራ እንከላከል፡፡